သင်၏ HTC Desire ကိုအခမဲ့သော့ဖွင့်ပါ။ | Androidsis
el_iulius | | HTC က, လဲ tutorial
ယောက်ျားလေးများ XDA developer များ သူတို့ဟာနောက်ထပ်ခြေလှမ်းတစ်လှမ်းလှမ်းနိုင်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်သမျှအသုံးဝင်မှုတစ်ခုရရှိခဲ့သည် ငါတို့လွှတ် ကို HTC Desire အနည်းဆုံးပြcomplနာများနှင့်အတူအိမ်မှာ အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ဆာဗာသည်၎င်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်ငါးကြိမ်မလွှတ်ခဲ့သော်လည်း၎င်းသည်ဆဌမအကြိမ်ဖြစ်သည်။ လိုက်နာရမည့်အဆင့်များမှာ -
ငါတို့သွားတယ် XDA post y ကျနော်တို့ပုံရိပ်တွေကို download လုပ်ပါ ပထမ ဦး ဆုံးမှတ်ချက်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုညွှန်ပြကြောင်း cd ၏။
စံချိန် စီဒီတစ်ခုပေါ်ကပုံ။ ငါအသုံးပြုသောအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ဖတ်ပါပွီ VMWare သို့မဟုတ် Virtual Box ISO ကို boot ရန်။ အတော်များများသည် terminal နှင့် USB ဆက်သွယ်မှုပြproblemsနာရှိခဲ့သည်။ ၎င်းကိုမည်သို့ပြုပြင်ရမည်ကိုသင်သိလျှင်ရှေ့သို့သွားပါ။
CD ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာတွင်မိတ်ဆက်ပြီးစတင်သည် (သင်က virtual machine တစ်ခုမှလုပ်လျှင် ISO မှစတင်ရန် configure လုပ်ရမည်)
ဖုန်းကို USB မှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ရန်ကွန်ပျူတာကိုတောင်းလိမ့်မည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်သောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ Desire စနစ်မှာရှိလိမ့်မည် HBOOTဆိုလိုသည်မှာ Vol - button နှင့် Power ခလုတ်ကိုတစ်ချိန်တည်းနှိပ်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်သည်။
ကွန်ပြူတာကဘာတွေထည့်တယ်ဆိုတာကိုဆက်သွယ်ပြီးလေ့လာတယ်။ စစ်ဆင်ရေးပြီးဆုံးသောအခါနှစ် ဦး စလုံးပြန်လည်စတင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာရှိသည်ဖို့အရေးကြီးတယ် HBOOT ၀.၉၃.၁၀၀၀ နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်၏လည်ပတ်မှုကိုအာမခံသော ၅.၁၄.၅.၁၇ နှင့် ၅.၁၄.၅.၁၇ ရေဒီယို (ကျွန်ုပ်တွင်လိုအပ်ချက်နှစ်ခုလုံးရှိပြီးမမျှော်လင့်သောအဖြစ်အပျက်များမရှိခဲ့ပါ) ။ ရှိခြင်းသည် အမြစ် နှင့် S-Off ကျွန်ုပ်သည်ဤလိုအပ်ချက်နှစ်ခုအနက်မှမည်သည့်နေရာကိုမျှဖတ်ရှုခြင်းမပြုပါ။ သို့သော်ဤ caliber ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုလုပ်ဆောင်သည့်အခါနှစ်ခုလုံးကိုအကြံပြုပါသည်။
el en XDA post နှင့် HTCManíaမှပြုလုပ်သည် ၎င်းတို့သည် tool ကိုပိုမိုလုံခြုံစိတ်ချစွာဖြစ်စေရန် bug များကိုသတင်းပို့သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးပြီးနောက် terminal ကိုစမ်းသပ်ဖို့၊ ပြproblemsနာမရှိဘူးဆိုတာကိုစစ်ဆေးဖို့အကြံပြုလိုတယ်။ လူတိုင်းသည်၎င်းတို့၏ terminal နှင့်၎င်းတို့၏ကွန်ပျူတာများအတွက်တာဝန်ရှိသည်၊ ဖန်တီးသူများသည်ချွတ်ယွင်းမှုများအတွက်တာ ၀ န်မရှိပါဟုပြောစရာမလိုပါ။
ငါသည်သင်တို့ကို၏ယောက်ျားလေးများ၏ဗီဒီယိုထားခဲ့ပါ HTCMania လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးနှင့်အတူ။
တွေ့မြင်သည် - XDA
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » သင်၏ HTC Desire ကိုအခမဲ့သော့ဖွင့်ပါ။
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်!! ငါ XDA link ကိုချနေသောကြောင့်ငါ htc mania ဖိုရမ်ကိုသွားခဲ့ရတယ်
ဒါပေမယ့်မနေ့ကငါနင့်ကိုနင့်မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့နို့ရည်ဖြန်းပေးခဲ့တယ်၊ ဒါကဆိုးတယ်၊ ခန်းခြောက်သွားပြီ။ ငါကအရာအားလုံးနဲ့သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ငါလုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းမရှိဘူးလား။
ငါ့မှာ HBoot ဗားရှင်းမရှိဘူး၊ ငါ့အတွက်ပထမဆုံးအလုပ်လုပ်တယ်။
၎င်းသည် vodafone nexus အတွက်အလုပ်လုပ်ပါသလား။
မင်္ဂလာပါ။ သတင်းပို့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်မင်းကိုစိတ်ထိခိုက်စရာမလိုဘဲအရာရာကိုကောင်းကောင်းဖတ်သင့်တယ်လို့ငါထင်တယ်။
ငါမူရင်း XDA ဖိုရမ်စာသားမှကိုးကား:
«ဒီ app က root (သို့) s-off မလိုအပ်ပါဘူး။ ဘယ် hboot နဲ့ radio version ကိုမဆိုအလုပ်လုပ်သင့်ပါတယ် (၎င်းကို HBOOT ဖြင့် ၀.၉၃.၁၀၀၀ အထိနှင့်ရေဒီယိုကို ၅.၁၄.၅.၁၇ အထိစမ်းသပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ) »
"ဒီ application က root (သို့) s-off မလိုပါဘူး။ hboot နဲ့ radio တစ်ခုခုနဲ့အလုပ်လုပ်သင့်တယ်။ (HBOOT ကို ၀.၉၃.၁၀၀၀ အထိရေဒီယိုနဲ့ ၅.၁၄.၅.၁၇ အထိစမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည်")
ထို့ကြောင့်သီအိုရီအရ HBOOT နှင့်ဆန္ဒရှိသူများနှင့်ယခင်ဗားရှင်းရေဒီယိုရှိသူများသည်ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို အသုံးပြု၍ သူတို့၏မိုဘိုင်းကိုဖွင့်နိုင်သည်။
ဒါဟာငါ့အဘို့ပြီးပြည့်စုံသောအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်! ကျွန်ုပ်၏ Desire ကို ၅ မိနစ်လောက်ဖြန့်ချိခဲ့ပြီး ... နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်တွင် hboot နှင့် radio version တစ်ခုခုဖြင့်အလုပ်လုပ်သင့်ကြောင်းပြောရမည်။ ဤ application ကို root လုပ်ရန်မလိုပါ။
ငါ IMEI ကသော့ဖွင့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်သူတို့ကသူတို့ကငါ့အသတ်သတ်မှတ်မှတ်ယူနစ်များအတွက်ကုဒ်များကိုရှာမတှေ့နိုငျကွောငျးကိုအမြဲပြောခဲ့တယ်။
ငါသာပြောနိုင် ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်ဖိုင်ကို cd သို့ကူးယူပြီး boot လို့ဆိုပေမယ့်ကျွန်တော့်ကိုမစပါ။
ငါ့မှာ windows xp ရှိတယ်၊ ပြproblemနာဘယ်မှာလဲမသိဘူး။
ကောင်းပြီ၊ cd ထဲမှာအထဲမှာကွန်ပျူတာကိုဖွင့်ရမယ်။ ၎င်းသည် cd မှ boot မလုပ်ပါကသင် bios ကိုပြုပြင်ရမည်
ကျွန်ုပ်၌ HTC ၏အလိုအလျောက်လှုပ်ရှားမှုရှိသော်လည်းကျွန်ုပ် vodafone ကဒ်နှင့် WhatsApp ကိုအလုပ်မလုပ်ပါကဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းမပြုနိုင်ပါ။ အထက်တွင်ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်ကြိုးစားသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏စီဒီထဲ၌စီဒီကိုထည့်ပြီးကွန်ပျူတာကဆက်လက်ထားရှိသည် မျက်နှာပြင်ကိုအနက်ရောင်နှင့်ခဏကြာပြီးနောက်ပုံမှန်စတင်သည်
LC ။ ဟုသူကပြောသည်
သို့သော်အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ 3G ဆက်သွယ်မှုသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ၎င်းသည်၎င်းကြောင့်ဖြစ်ခြင်းရှိ၊ မရှိကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ မှန်ကန်စွာ။ အော်ပရေတာကိုထပ်မံရွေးချယ်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်သည်ဖွဲ့စည်းမှုကိုထိတွေ့ခဲ့သော်လည်းလုံးဝဘာမှမဖြစ်ပါ။ မဆိုအကြံပြုချက်?
3G ဆက်သွယ်မှုကဒေတာလား။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ဒေတာဖြစ်ပါကချိန်ညှိချက်များ -> ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုများ -> မိုဘိုင်းကွန်ယက်သို့သွားပြီးအရာအားလုံးအဆင်ပြေကြောင်းစစ်ဆေးပါ။ ဒေတာကို enable လုပ်ပြီး APN သည်သင်၏အော်ပရေတာဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ 3G လွှမ်းခြုံမှုဖြစ်ပါက "အသုံးပြုမှု 2G ကွန်ရက်များသာ" ရွေးစရာကိုပိတ်ထားပါ
ငါဒီလိုထုတ်ပြန်လိုက်တာနဲ့ SIM ထဲမှာ HSPA ရော 3G ပါပါအချက်အလက်တွေသိမ်းထားတယ်
Vicente Alcoba ဟုသူကပြောသည်
အလွန်ကောင်းမွန်သောအလုပ်၊ ဗီဒီယိုနှင့်အရာအားလုံးအလွန်ရှင်းလင်းစွာရှင်းပြနိုင်ခဲ့သည်။ အရာအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်သည်အပြောမကြီး၊ အလွန်မြန်ပြီးအလွန်လွယ်ကူပါသည်
Vicente Alcoba ကိုပြန်ကြားပါ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တကယ်ပဲ APN ကိုပြုပြင်မွမ်းမံရန်ကျန်နေသည်။
ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ် Vodafone 22155 ကိုခေါ်ပြီးမိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်၎င်းတို့မည်သို့ပြင်ဆင်ရမည်ကိုပြောခဲ့သည်။ (သင်စိတ်ဝင်စားပါကခေါ်ဆိုခ၏စျေးနှုန်းသည် ၀.၅၀ ဆင့်မသက်ဆိုင်ဘဲ)
ရှင်းပြချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် - ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ချက်မဲ့ပြီ - တစ်ချိန်တည်းမှာ # ၁၁ - ဒါပေမယ့် hboot 11 ကိုသော့ဖွင့်လိုက်တယ် - ရေဒီယို 0.93.0001 - ဒီမိုဘိုင်းအတွက်သံလိုက်အိမ်မြှောင်အစီအစဉ်များကိုသင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သလား။ နှုတ်ဆက်ခြင်း ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၌ကျွန်ုပ်၏ htc ဆန္ဒရှိပြီး၊ ဒီနည်းနဲ့ထုတ်လွှတ်ခြင်းဖြင့်မည်သည့်စွန့်စားမှုကိုမဆိုခံနိုင်မလားဆိုတာကိုသိချင်ပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ xda စာမျက်နှာတွင် cdms ဖြစ်ပါကဖုန်းသည်၎င်းကိုလုပ်ရန်အကြံပြုခြင်းမပြုပါ။ နောက်ကြောင်းပြန်မလှည်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
ပြီးတော့ငါ apn၊ hbook နဲ့ radio တို့ကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲမသိဘူး ... ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ... စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ငါကလေ့လာသူတစ်ယောက်ပါ။
Google Talk ကလုပ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော့်ကိုအလုပ်မလုပ်တော့ဘူး။ ပြနာက kernel application တစ်ခုဖြစ်တယ်၊ ဒါကြောင့်အခုဘယ်လို restore လုပ်ရမယ်၊ ဘယ်လို reinstall လုပ်ရမလဲမသိဘူး… - -S
သင်လွှတ်ပေးဘို့, သင်သည်မည်သည့်တိုးတက်မှုသတိထားမိပါသလား? ဆိုလိုတာကပိုမြန်သွားပြီလား၊ ဒါမှမဟုတ်သိသာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုရှိလား။ မဆို siml ထားနိုင်ဖြစ်ခြင်းအပြင်။
ယနေ့ကျွန်ုပ်ကို htc ၏ဆန္ဒကိုယူဆောင်လာသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ = D
ဒါဟာပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အလုပ်လုပ်ခဲ့တာပါ။
ငါအပြစ်ကို terminal ကိုမှဖယ်ရှားပစ်ရန်ရှိသည် ?????? ကျေးဇူးပါချစ်မိတ်ဆွေ
Desire HD အတွက်အလုပ်လုပ်ပါသလားသို့မဟုတ် Desire အထူးသီးသန့်ဖြစ်ပါသလား။
တစ်စုံတစ် ဦး ကဒီ post သို့ဒီ link ကိုထည့်လို့ရလား။ ဒီဟာကခဏနေတော့ငါဒီမေးခွန်းကိုမေးလို့မရဘူး။
တစ်စုံတစ် ဦး ကဒီ link ကိုဒီ post ကိုဒီပုံရဲ့ download လုပ်နိုင်မလား။ ငါခဏနေခဲ့ပြီးပြီလို့ပြောတဲ့ post ကိုရှာမတွေ့ဘူး။
vodafone ရဲ့ဆန္ဒ HD နဲ့သုံးလို့ရမရသိလိုပါသလား။
ငါ USB ပုံရိပ်ကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးပါပြီ။ ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာကို reboot လုပ်ပြီးပြီ။ na de na ကမလုပ်ပါဘူး။
အိမ်မှာကျွန်တော့်မှာ Airis netbook ရှိတယ်၊ သူကျွန်တော့်ကိုခွင့်ပြုမလားဆိုတာတော့မသိဘူး၊ အရမ်းကန့်သတ်ချက်ရှိတယ်
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်အထူးသဖြင့်ကွန်ပျူတာစတင်ဖွင့်သောအခါ၎င်းအတွက်ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) တပ်ဆင်သောအခါကျွန်ုပ်တစ်ခုခုလုပ်ရန်လိုမလိုတစ်စုံတစ် ဦး ကပြောနိုင်လျှင်
ဒါပေမယ့်ဖုန်းကိုလွတ်အောင်ဘယ်လိုသုံးတာလဲ။ မည်သည့်ကုမ္ပဏီမှဆင်းမ်ကတ်နှင့်အခြားအရာများအတွက်ဆင်းမ်ကတ်ကိုအသုံးပြုရမည်နည်း။ အဲဒါကိုပိုစျေးကြီးရောင်းဖို့လား XD
တိုးတက်မှုအတွက်ဘာရှိဖို့လိုသနည်း။ ငါက hacked ပြီးတော့ဘာမှမသတိမထားမိ
ris ။ ။ ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်တွင် vodafone အလိုရှိ z z froyo နှင့်အလုပ်လုပ်ပါကမည်သူမည်ဝါဖြစ်သနည်း။
ငါ၏အလိုဆန္ဒအပေါ်အလုပ်လုပ် 100% !!!!
ငါ htc အလိုကိုတွေ့ရှိပြီး၎င်းကိုပိတ်ဆို့ခဲ့သည်။ ဤလွှတ်ပေးမှုကို i မှပိတ်ဆို့ရန်အတွက်အသုံးပြုသည်
၎င်းသည် virtual machine ဖြင့်လုပ်ဆောင်ပါက၎င်းသည်အလုပ်လုပ်ပါသလား။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်ဖို့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။
HBOOT 0.93.0001 ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ, ဒီမှာနှင့်ထိုအရပ်မှသတင်းအချက်အလက်ယူပြီး, ငါ hboot ဝင်ကြ၏
ငါ HBOOT 0.93.0001 အစား HBOOT 0.93.1000 ရှိသည်
ဝင်ပြီးနောက် SIMLOCK တစ်ခုလုံးအဆုံးမှာပေါ်လာပြီးအသံအတိုးအကျယ်သော့များဖြင့်ရွေ့လျားနေသည်။
အဆိုပါ Sim သော့ဖွင့်လိုပါသလား? ဟုတ်တယ်ဆိုရင် volume key ကိုငါနှိပ်လိုက်ပြီးဖုန်းပြန်ဖွင့်လိုက်တယ်။
သတိမထားမိဘဲငါအတွင်းထဲမှလိမ္မော်ရောင် sim နှင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်၊ ၎င်းကိုပြန်လည်စတင်ပြီးလိမ္မော်ပင် pin ကိုထည့်လိုက်သည်
ဖုန်းကိုပိတ်ပြီး vodafone sim ကိုထည့်လိုက်တယ်။ vodafone pin ကိုထည့်လိုက်တယ်။
Sim အသစ်တစ်ခုကို ၀ င်သောအခါ၊ နောက်ခံပုံများနှင့်ချိန်ညှိချက်များကိုပြောင်းလဲလိမ့်မည်။ အခြားမည်သည့်အရာကိုမျှငါမသိ။ ကောင်းပြီ၊ ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်သည်အခြားမိုဘိုင်းလ်ဖုန်းခေါ်ပါ၊ ၎င်းသည် vodafone ကဒ်ဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။
လက်ကိုင်ဖုန်းမှအရာအားလုံးကိုမိုဘိုင်းဖုန်း (သို့) အရာအားလုံးနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ကျွန်ုပ်မလိုအပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းလ်တွင်ကွဲပြားသောဗားရှင်းရှိမည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်မြင်။ အောင်မြင်ခဲ့သည်။ \_ t
HBOOT 0.93.0001 ကိုအကြောင်းပြန်ပါ
ငါ hboot နဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းပြောခဲ့ပြီးပြီ။
ပွင့်လင်း MCCMNC ဖိုင်ပျက်ကွက်
ဖွင့် CID ဖိုင်ပျက်ကွက်
လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးပြီ, device ကို reboot?
မင်းအရမ်းကံကောင်းတယ် ... : _ (ငါမဟုတ်ဘူး။
ဒါကငါ့ဆီထွက်လာတယ်၊ ဖိုင် ၂ ခုပျက်သွားတယ် (ဖိုင်များပျက်ကွက်ခြင်း)
ထို့နောက် vodafone ကဒ်ဖြင့်ပိတ်ပါ။
ကံကောင်းပါစေ၊ ငါတို့လက်ချောင်းများကိုဖြတ်ကျော်ကြရအောင်… ..
HBOOT0.93.0001 HBOOT တူတူဘဲ Gambri နဲ့လည်းအတူတူပဲ၊ ငါတို့နောက်တစ်နည်းကြိုးစားကြည့်ရ ဦး မယ်။
မင်းဒါကိုဘယ်လိုဖြန့်ချိခဲ့တာလဲ ငါကဲ့သို့တူညီသောလမ်းအတွက်, ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လို ??
htc HD HD .A9191 ပျေါမှာအလုပ်လုပ်မလားမသိဘူး
ထိုအခါ 0.93.1000 HBOOT ဖြစ်ပါတယ်။
နှင့် Root နှင့် S-Off တို့ပါ ၀ င်သည်။
ယခုကျွန်ုပ် HTC Desiree ကိုအောက်ပါရေဒီယိုနှင့် HBOOT နှင့် FUCIONAAA ဖြင့်စမ်းကြည့်သည်။
Teix ကငါ့ကိုဘယ်လိုဖြန့်ချိတယ်ဆိုတာငါတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ပို့နိူင်တယ်။ ငါကမစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူး၊ ငါ hboot ရေဒီယိုကနေသင်နဲ့တူညီတဲ့တန်ဖိုးတွေရှိတယ်။
OLA IGNORANCE FOR XD ဒါပေမယ့်ငါမှာပြသနာတစ်ခုရှိတယ်။ ငါ hboot ကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲ။ ကျွန်ုပ်၌ဘာရှိသနည်းမိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။
ကောင်းပါပြီ။ HTC Desire S နှင့်အလုပ်လုပ်ပြီးမသိဘဲမနေနိုင်တာကိုငါသိချင်ပါတယ်သို့သော်၎င်းသည်ကွဲပြားသောမိုဘိုင်းဖြစ်သည်
ငါသွားပြီလို့ထင်တယ်ဒါပေမယ့် pin ကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါသူက "ကွန်ယက်ပိတ်ဆို့သွားပြီးအဲဒါကငါ့ကို puk ကိုတောင်းတယ်၊ ငါမှာလည်းမရှိဘူး။ " ငါဘာလုပ်သင့်လဲ?
ငါကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ငါ့အတွက်တော့ကောင်းပါတယ်။ ငါ့ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်။ ငါအရင်ကရှိခဲ့တဲ့တခြားအော်ပရေတာတစ်ခု (sim) ကို sim သွင်းတဲ့အခါငါ roaming နဲ့ဆက်သွယ်နေတယ်လို့ထင်ရတယ်။ ဒီဟာပုံမှန်လား၊ ဒါမှမဟုတ်ပြaနာရှိလားမသိဘူး
PS: ဒီဖြန့်ချိမှုကို IMEI ကမထုတ်ပြန်ဘူးလား။
Laura Lovely အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ဆန္ဒကို 3G ဖြန့်ချီနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ၊ တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်အားအဖြေပေးနိုင်ပါသလား။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်၏ Orange HTC Desire ဖြင့်စမ်းကြည့်ပြီးနောက်ဒုတိယအကြိမ်တွင်၎င်းသည်သော့ဖွင့်လိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် 3G လွှမ်းခြုံမှုကိုမဆုံးရှုံးရသေးပါ။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်၏ပရိုဂရမ်များအားလုံးအလုပ်လုပ်နေပါကအရာရာမည်သို့မည်ပုံတည်ရှိမည်ကိုရက်အနည်းငယ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မည်။
Windows7က application ကို run လို့မရဘူး၊ ဒါကြောင့် ISO image ကို download လုပ်တယ်၊ virtual machine (VirtualBox) ကိုသွားပြီးဖုန်းကိုချိတ်ဆက်တယ်ပြောတယ်၊ ငါနှိပ်တယ်၊ ခလုပ်နှိပ်တယ်၊ ဘာမှမရှိဘူး၊ Terminal ကို restart လုပ်ရမှာဖြစ်ပေမယ့်မပြီးပါဘူး။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က disonnect လုပ်ပြီးနောက်တစ်ခါထပ်လုပ်ပါတယ်။ ခြောက်ကြိမ်မှခုနစ်ကြိမ်အထိကြိုးစားခဲ့ရသည့်လူများကိုကျွန်ုပ်ကြားခဲ့ရသည်၊ ထို့ကြောင့်အားယူပါ။
Jl Electronicstore ဟုသူကပြောသည်
htc desire hd အတွက်မ ၀ င်ပါ၊ ၎င်းသည်ဆန္ဒနှင့်ခံစားချက်အတွက်သာအလုပ်လုပ်သည်။ 🙁
Jl Electronicstore အားစာပြန်ပါ
ဒါပေမယ့်ဖြစ်စဉ်ကို sim နှင့် sd နှင့်အတူသို့မဟုတ်နှစ် ဦး စလုံးမပါဘဲပြုရမလဲ
ကန်ထရိုက်တာများထက်ကွဲပြားခြားနားသော sim နှင့်အတူ? ။ ဆိုလိုတာကဖုန်းကလိမ္မော်ရောင်ဖြစ်ပြီး pepephone ကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်၊ pepephone ကိုရိုက်ထည့်ရမှာလား။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ဓာတ်ပုံကို USB Stick တွင် Unetbootin Utility ဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ထားကြောင်းမှတ်ချက်ပေးချင်ပါသည်။ ကွန်ပြူတာကို USB ကနေစလိုက်တယ်၊ အမှားတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ငါဖုန်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်လွှတ်လိုက်တယ်။ ငါ SIM Card ကိုထည့်လိုက်ရင်အားလုံးပြီးသွားပြီ။
X ကိုလွှတ်ပေးရန်ကျွန်ုပ်၏အစီအစဉ်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် HTC Desire XK ကို၎င်းကိုဒေါင်းလုပ်ချရန်ကြိုးစားခဲ့ပြီး LINK သည်လက်လှမ်းမမီတော့ပါ။ ၎င်းကိုထုတ်လွှင့်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ PELISCAFO1@HOTMAIL.COM
ကောင်းပါပြီ။ ကျွန်ုပ်ကိုဒီအစီအစဉ်ကိုပို့ပေးပါက X ကိုသိချင်ပါတယ်။ ဒီပို့စ်ကအမြဲတမ်း ၀ န်ဆောင်မှုထဲကနေထွက်လာပြီးဒီစကားကသင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ PELISCAFO@1HOTMAIL.COM ငါ K သည်နှစ် ဦး စလုံးမမျှော်လင့်ပါတယ်နှင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Regina Moretto ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၌ HBOOT 0.93.1000 နှင့် 5.14.05.1 ရေဒီယိုရှိလျှင်ကျွန်ုပ်မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်နည်း။
Regina Moretto အားစာပြန်ပါ
မင်း! ငါအများကြီးတစ်စုံတစ် ဦး ကငါ့ကိုငါ့ကိုပို့နိုင် program ကိုရှိသည်ချင်ပါတယ် xda ၏စာမျက်နှာ eske မှာမရှိတော့ဘူး eskerrik asko !!! ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် (ps: ဗွီဒီယိုမှ Berri Txarrak မှ Libre ၏သီချင်းသည်အလွန်ကောင်းသည်!) ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်: goiku1985@hotmail.com နောက်တဖန် eskerrik Asko
hboot 0.93.0001 နှင့်ရေဒီယို 5.11.05.27 နှင့်အတူစမ်းသပ်ပြီး။ ပထမဆုံးအကြိမ်သော့ဖွင့်ခြင်းကို😉
Hboot693 1002 နှင့်ရေဒီယို511 05 14 တို့ဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်
HBOOT-1.31.000 နှင့် RADIO-1.10.98.15 ရှိသည့်ပံ့ပိုးသူသည် Claro-Peru မှဖြစ်သော HTC Desire C ကိုကျွန်ုပ်မည်သို့သော့ဖွင့်ရမည်နည်း။